Ugu Weyn Ee Cyclamen
Cyclamen (Cyclamen - laga bilaabo Giriigga - Baaskiil - wareegga) - xayawaan qashinka ah oo badan oo ah qoyska Primula (latin Primulaceae). Wadanka Cyclamen waa Central Europe iyo Asia Minor. Dhawaan, botanistayaashu waxay aqoonsadeen noocyada dhirta cusub ee laga helo xeebaha Mediterranean, Caspian iyo Black Seas.
Maxaa dhirta gurigaagu ku haboon yihiin qolkaaga jiifka
Qolka hurdadu waa meel aad u qaali ah oo u baahan jawi gaar ah, midka aad rabto in aad ku riixdo adoo aadaya geeskaaga shakhsi ahaaneed. Sariiraha, dhar-xidhka iyo alaabooyinka kale kuma filna arintan, waxaadna u baahan doontaa inaad beerato qol jiif. Qodobkani waxaan kuu sheegi doonaa waxa dhirta lagu hayn karo qolka jiifka iyo sida loo daryeelo iyaga.
Maxaa ka caawiya kicinta?
Xilliga qaboobuhu wuxuu mar walba keenaa cudurada iyo xitaa cudurrada faafa. Waa inaan iibsanaa daawooyinka farmashiyaha, kuwaas oo hadda ah qaali. Si kastaba ha ahaatee, waad isticmaali kartaa cuntooyinka daawada dhaqameed, taas oo badbaadisay xigmadda kumanaan sanadood iyo xitaa hadda, qarniga daawada, si deeqsinimo leh ula wadaagaan qof walba.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cyclamen 2019